Tohamboivoy eto Antananarivo Andrasana ny fepetran’ireo manampahefana anio
Hanao fanambarana miaraka mikasika ny fandaminana ny fifamoivoizana ireo manampahefana manoloana ny tohamboivoy manerana ny renivohitra.
Tsy andraikitry ny mpitandro filaminana irery ihany mantsy ny fisahanana ny fandaminana ny fifamoivoizana, indrindra eto an-drenivohitra izay mampiteny ny moana ny fitohanana lavareny. Hiray feo eo amin’ny toeram-piasan’ny polisim-pirenena avokoa anio ny zandary, ny avy amin’ny minisiteran’ny fitaterana sy ny serasera, ny kaominina Antananarivo Renivohitra, ny mpandrindra ny caméra de surveillance an’ny OMTE. Efa vita tanteraka ny lalana fa lasa fiantsonan’ny fiara izany.
Efa nampitomboina ny isan’ireo polisy misahana ny fifamoivoizana fa tsy nahomby. Tetikadin’ny mpitandro filaminana herinandro vitsy lasa izay ny hanaovana lalan-droa ireo lalambe mikodana saingy hipoka fiara mitandahatra mijanona raha tsy hilaza afa tsy ny avy eo Anosy hihazo an’Ankadimbahoaka. Marihina moa fa mahazaka lalan-droa mifanena avokoa ny lalana eto Antananarivo Renivohitra, saingy lasa fiantsonan’ny fiaran’ny tranombarotra ireny. Andrandraina noho izany ny lamina vaovao fa nanezaka ihany ny polisy fa tsy afa-nanoatra. Izao koa vao tonga ireo fitaovana fanariana fako. Ity farany izay nisavovona nibahan-dalana nanerana ny renivohitra.